Xa isichumisi esenziwe ekhaya sisenziwa ekhaya, umgquba wenkunkuma yendalo ubalulekile.
Ukwenza isichumisi yindlela efanelekileyo neyoqoqosho yokulahla inkunkuma yemfuyo
Zintathu iintlobo zeemfumba: ezithe tye, ezomgodi kunye nomngxuma
Ilungele ubushushu obuphezulu, imvula, ukufuma okuphezulu, iindawo eziphezulu zeetafile zamanzi. Khetha indawo eyomileyo, evulekileyo, nekufutshane nemithombo yamanzi. Ububanzi be-stacking ye-2m ukuphakama 1.5-2m ubude bulawulwa ngokobungakanani bempahla eluhlaza. Qinisa umhlaba phambi kokustacker uze ugqume umaleko ngamnye wezinto ngezinto ngomaleko wengca okanye ityhubhu yokufunxa incindi ye-seepage .. Uluhlu ngalunye luyi-15-24cm ubukhulu. Yongeza isixa esifanelekileyo samanzi, ikalika, udaka, ilindle, njl njl phakathi kwamanqanaba ukunciphisa ukonyuka kolophu kunye ne-ammonia volaculation. Emva kwenyanga enye yokwenza umgquba, qhuba idombolo yokujika ujike umgquba ngaphezulu kwaye ujike rhoqo phezu kwemfumba kude kube ekugqibeleni izinto zibola. Umlinganiselo ofanelekileyo wamanzi uyafuneka ngokuxhomekeke kubumanzi okanye ukoma komhlaba. Izinga lomgquba liyahluka ngokwamaxesha onyaka, ngesiqhelo iinyanga eziyi-3-4 ehlotyeni iinyanga ezi-2 kunye neenyanga ezi-3-4 ebusika. .
Uhlobo lomngxuma wesiqingatha
Ihlala isetyenziswa ekuqaleni kwentwasahlobo nasebusika. Khetha indawo elele phantsi ukumba umngxuma onzulu ongama-2-3 yeenyawo i-5-6 yeenyawo ubude kunye ne-8-12 yeenyawo ubude. Iindawo ezinqamlezileyo kufuneka zibekwe emazantsi kunye neendonga zomhadi. Yongeza i-1000 kg yomququ owomileyo phezulu kumgquba uze uwutywine ngomhlaba. Emva kweveki yokwenza umgquba, amaqondo obushushu ayenyuka. Usebenzisa i-dumper edityanisiweyo, vula i-reactor ye-fermentation ngokulinganayo ngaphezulu kweentsuku ezingama-5-7 emva kokupholisa, kwaye uqhubeke nokwenza umgquba kude kube yinto ebunjiweyo iphele.
Ngokubanzi ziimitha ezi-2 ubunzulu, ekwabizwa ngokuba luhlobo lwangaphantsi komhlaba. Indlela yokufumba iyafana nendlela yesiqingatha-somngxuma. Sebenzisa i-helix dumper kabini ngexesha lokubola ukwenza izinto ngakumbi ekunxibelelaneni nomoya.
Ubushushu obuphezulu bomgquba we-anaerobic.
Ukwenza umgquba ngobushushu obuphezulu yindlela engenabungozi yokulahla inkunkuma yendalo, ngakumbi inkunkuma yabantu. Izinto ezinobungozi ezifana neebhaktheriya, amaqanda kunye nembewu yengca kwi-straw kunye ne-excreta ziyabulawa emva kokunyanga kwamaqondo aphezulu. Ubushushu obuphezulu bomgquba we-anaerobic ziindlela ezi-2, uhlobo lwemfumba ethe tyaba kunye nohlobo lwembombo. Inkqubo yokwenza umgquba iyafana naleyo yomgquba oqhelekileyo. Nangona kunjalo, ukuze kukhawuleziswe ukubola kweendiza, ubushushu obuphezulu bomgquba kufuneka bongeze iqondo eliphezulu lobushushu beselulose yokubola, kunye nokuseta izixhobo zokufudumeza. Amanyathelo okubamba ubushushu kufuneka athathwe kwiindawo ezibandayo. Umgquba wobushushu obuphezulu udlula ngokwamanqanaba aliqela: ubushushu obuphezulu-ukupholisa-ukubola. Izinto eziyingozi ziya kutshatyalaliswa kumaqondo obushushu aphezulu. Kuya kuba kuhle ukuba unesamente ekhethekileyo okanye indawo yokwenza umgquba.
Esona sithako: nitrogen.
Amacandelwana: i-phosphorus, i-potassium, isinyithi.
Isetyenziswa ikakhulu kwisichumiso se-nitrogen, uxinzelelo oluphantsi, akukho lula ukwenza umonakalo kwinkqubo yeengcambu. Ayifanelekanga ukusetyenziswa kakhulu ngexesha lokudubula kweziphumo. Ngenxa yokuba iintyatyambo kunye neziqhamo zifuna i-phosphorus eninzi, i-potassium, nesalfure.
Izinto zokwenza imveliso yezichumiso ezenziwe ekhaya.
Sicebisa ukuba ukhethe la macandelo alandelayo njengezinto ezingafunekiyo zesichumisi esenziwe ekhaya.
1. Tyala izinto ezisetyenziswayo
Kwiidolophu ezininzi ezinkulu eUnited States, urhulumente ubhatala abasebenzi abaqokelela amagqabi aqaqambayo. Xa kuvundiswa umgquba, uthengiselwa amafama ngamaxabiso aphantsi. Ngaphandle kokuba ikwitropiki, kungcono ukwenza umaleko ngamnye wamagqabi anqabileyo angaphantsi kwe-5-10 cm ubukhulu, amagqabi atyhidiweyo angqingqwa emhlabeni angaphezulu kwe-40 cm. Isithuba esiphakathi kwamanqanaba ahlukeneyo amagqabi avunayo kufuneka sigutyungelwe ngamasuntswana afana nomhlaba, onokuthatha iinyanga ezi-6 ukuya kwezi-12 ukubola. Gcina umhlaba ufumile, kodwa musa ukuwunkcenkceshela ngaphezulu ukunqanda ukulahleka kwezakhamzimba zomhlaba.
Ukuba iziqhamo ezibolayo, iimbewu, amaxolo, iintyatyambo, njl njl ziyasetyenziswa, ukubola kungathatha ixesha elide. I-Phosphorus, i-potassium nesalfure ziphezulu.
Ikhekhe leembotyi, ingqolowa yeembotyi, njl
Kuxhomekeke kwimeko yokwehla, umgquba uthatha iinyanga ezintathu ukuya kwezintandathu ukuvuthwa. Eyona ndlela yokukhawulezisa ukukhula kukudibanisa iintsholongwane. Enye yeendlela zokugalela umgquba kukuba akukho livumba nakanye. Isiqulatho sayo se-phosphorus, i-potassium nesalfure siphezulu kuneso somgquba, kodwa siphantsi kunesiqhamo somgquba. Umgquba wenziwa ngokuthe ngqo kwiimveliso zesoya okanye zesoya. Iimbotyi zesoya zithatha ixesha elide ukwenza umgquba ngenxa yokuba zinamafutha amaninzi. Kubahlobo abenza i-organic fat, isenokunganuki unyaka okanye iminyaka ukusukela ngoku. Ke ngoko, sicebisa ukuba iimbotyi zesoya ziphekwe kakuhle, zitshiswe zize zifakwe emanzini. Inokunciphisa kakhulu ixesha lokumitha.
Ilindle lezilwanyana ezitya utyani ezinje ngeegusha neenkomo zilungele ukuvundiswa kunye nokuveliswa kwesichumiso se-bio-organic. Ukongeza, umgquba weenkuku kunye nomgquba wehobe wephosphorus uphezulu, lukhetho olufanelekileyo.
Qaphela: Ukukhutshwa kwezilwanyana ezilawulwayo ze ziphinde zisetyenziswe kwisityalo esisemgangathweni zinokusetyenziswa njengezinto ezingafunekiyo kwizichumiso eziphilayo. Nangona kunjalo, ngenxa yokunqongophala kwezixhobo zokuqhubekeka phambili ekhaya, asikukhuthazi ukusetyenziswa kwelindle lomntu njengezinto ezingafunekiyo zokwenza isichumiso sezinto eziphilayo.
3. Imihlaba yesondlo yendalo yezichumisi zendalo
Ukwabelana ngesondo: Uyazala, kodwa viscosity ephezulu. Kufuneka isetyenziswe njengesichumisi esisisiseko, hayi sodwa.
Ingcambu yenaliti yePine
Xa ubukhulu obunqabileyo bungaphezulu kwe-10-20cm, inaliti yepineyini inokusetyenziswa njengezinto ezingafunekiyo kwizichumiso eziphilayo. Nangona kunjalo, awungekhe usebenzise ifayile ye-.
Imithi enomxholo ophantsi we-resin, njengokuwa kweentsiba zomthi, inefuthe elingcono.
Isichumisi sisebenza ngakumbi. Nangona kunjalo, ayinakusetyenziswa ngokuthe ngqo kwaye ingaxutywa nezinye izinto eziphilayo.
Isizathu sokuba into ephilayo kufuneka ichithakale ngokupheleleyo.
Ukubola kwento ephilayo kukhokelela kutshintsho oluphambili kwimisebenzi ye-microbial: ukubola kwezinto eziphilayo kuyandisa izondlo zesichumiso esisebenzayo. Kwelinye icala, umbandela wezinto ezingafunekiyo uyathanjiswa ukusuka kubunzima ukuya kuthambile, kwaye ubume butshintshiwe ukusuka ekungalinganiyo ukuya kufana. Kwinkqubo yokwenza umgquba, ibulala imbewu yokhula, iintsholongwane kunye namaqanda amaninzi. Ke ngoko, ihambelana ngakumbi neemfuno zemveliso yezolimo.
Ixesha Post: Sep-22-2020